Yggdrasil yakavanzika uye yakasarudzika IPv6 network kuitiswa | Linux Vakapindwa muropa
Yggdrasil ndeye yekutanga danho kuitiswa kweiyo IPv6 network.yakaparadzaniswa pamusoro peyakajairwa yepasirese network uye yakanyatsonyorwa kubva kune mumwe mugumo kuenda kune mumwe. Chiedza, kuzvirongedza-yega, akawanda-mapuratifomu anoenderana uye inobvumidza chero chero IPv6-inoenderana application yekutaurirana zvakachengeteka nemamwe maYggdrasil node. Yggdrasil haidi kuti uve ne IPv6 internet yekubatanidza; inoshanda zvakare pamusoro pe IPv4.
Yggdrasil gadzira pfungwa nyowani yekufambisa kugadzira pasi rose decentralized network, uko node dzinogona kubatana zvakananga kune imwe neimwe mune mesh network modhi (semuenzaniso, kuburikidza neWi-Fi kana Bluetooth), kana kubatana. pamusoro pematanho aripo IPv6 kana IPv4 (network pane network). Iyo yose Yggdrasil network inoonekwa kwete senge muunganidzwa wemasnets akaparadzaniswa, asi seimwe chete yakarongedzwa kutenderera muti, iyo iine "mudzi", uye node yega yega ine mubereki uye imwe kana vamwe vazukuru. Chimiro chemuti chakadai chinokutendera kuti iwe ugadzire nzira inoenda kunzvimbo yekuenda, inoenderana neiyo sosi node, uchishandisa iyo "locator" mashandiro, ayo anosarudza nzira kwayo node kubva pamudzi.
Ruzivo nezve muti rwunogoverwa pakati pemapfundo uye haruchengetwe pakati. Tafura ine hash (DHT) inoshandiswa kuchinjisa ruzivo rwekufambisa, iyo node inogona kutora ruzivo rwese nezve nzira inoenda kune imwe node. Iyo network pachayo inongopa chete magumo-kusvika-kumagumo kunyorera (passthrough node haigone kuona zvemukati), asi kwete kusazivikanwa (kana uchibatanidza pamusoro peInternet, vezera avo vane kutaurirana kwakananga kunoitika vanogona kuona iyo chaiyo IP kero, saka kusazivikanwa kunorongwa kuti ubatanidze maodhi kuburikidza neTor kana I2P).
Izvo zvinoonekwa kuti, kunyangwe chirongwa ichi chiri mudanho rekuvandudza alpha, yakatogadzikana zvakakwana kuti ishandiswe zuva nezuva, asi hazvipe vimbiso yekudzokera kumashure pakati peshanduro. YeYggdrasil 0.4, nharaunda inochengetedza seti yemasevhisi, kusanganisira chikuva chekutambira midziyo yeLinux yekugamuchira nzvimbo dzayo, YaCy yekutsvaga injini, Matrix yekutaurirana server, IRC server, DNS, VoIP system, BitTorrent tracker, mepu yekupedzisira, IPFS gateway uye proxy kuwana Tor, I2P uye clearnet network.
Parizvino lIyo yekumisikidza iri mune yayo vhezheni 0.4 uye mushanduro itsva chirongwa chitsva chekufambisa chakaitwa chisiri kumashure chinoenderana naYggdrasil. Zvakare kana uchimisikidza kubatana kweTLS nema node, pini yakakosha inoshandiswa. Kana pakanga pasina chinongedzo panguva yekubatanidza, iyo inoguma kiyi inozopihwa kune yekubatanidza. Kana kusunga kwasimbiswa, asi kiyi yacho isingaenderane, kubatana kucharambwa. TLS ine kiyi inosunga inotsanangurwa senzira yakakurudzirwa yekubatanidza kune vezera.
Imwe shanduko yakaitwa ndeyekuti kodhi yacho yakanyatsogadziriswazve uye kunyorwazve kuitira nzira uye musangano manejimendi, iyo yakawedzera mashandiro uye kuvimbika kwekushanda, kunyanya kune maodhi anowanzo shandura maviri. Periodic kiyi kutenderera inoitwa mune cryptographic zvikamu. Wakawedzera rutsigiro rwekushandisa nzira, iyo inogona kushandiswa kuendesa tsika IPv6 traffic. Iyo Yakaparadzirwa Hash Tafura (DHT) dhizaini yakagadzirwazve uye rutsigiro rweDHT-based routing yakawedzerwa. Iko kuiswa kweiyo routing algorithms kwaendeswa kune rakasiyana raibhurari
IPv6 IP kero dzave kugadzirwa kubva ed25519 veruzhinji makiyi pachinzvimbo chehash X25519 yako iyo inokonzeresa ese epamukati IP kero kuti ichinje mushure mekusimudzira kuenda kuYggdrasil 0.4.
Zvimwe zvigadziriso zvinopihwa kutsvaga kwevakawanda vezera.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve kuitwa uku, iwe unoda kuziva maitiro ekuisa Yggdrasil uyezve maitiro ekugadzirisa kana kubvunza zvinyorwa zvacho, unogona kuzviita kubva pane iyi link iripazasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Yggdrasil yakavanzika uye yakasarudzika IPv6 network kuitiswa
PostmarketOS 21.06 inosvika iine rumwe rutsigiro rwechigadzirwa, kugadzirisa uye nezvimwe